Fitaovana fanamboarana volavolan-tsolika ho an'ny fanatanjahan-tena-HLQ
Home / Ultrahigh Frequency Series / Fitaovana fanaovana pirinty Brazing
Induction Brazing Plane Equipment
Sokajy: Ultrahigh Frequency Series Tags: Billets, fandatsahan-drà volavolan-dalàna, biletao biletà, lafaoro fampandehanana lavenona fako, milina fampitaovana volavolan-dalàna, volavolan-dalàna volavolan-dalàna, fampandehanana famonoana bileta
1.With high frequency up to 200KHz, and very thin parts and small parts can be heated easily.
Ny 2.IGBT sy ny teknolojia tsy miasa ankehitriny dia nampiasaina; Mihoatra ny fahamendrehana sy ny fihenan'ny fikojakojana.
5. Asehoy ny herin'ny hafanana sy ny fanamafisam-peo ary ny fihodinan'ny haavo.
6. Tsotra ny fametrahana, azo atao amin'ny tsy fahaizana manokana ny fanorenana;
7. Lanjany kely, vitsy kely;
8. Ny endrika hafa sy ny haben'ny indraindray dia mety hovana mora foana ny hafanana.
9. Ny tombony amin'ny modely amin'ny timer: Ny hery sy ny fotoana fiasana amin'ny vanim-potoana fametrahana sy ny fe-potoana voatahiry dia azo ampiasaina, mba hahatsapana faingana ny fanamafisam-peo, ity modely ity dia soso-kevitra hampiasaina ho an'ny famokarana fandefasana mba hanatsarana ny fiverimberenana.